IPacketZoom's Mobile Expresslane CDN Ihlanganyele neAmazon Cloudfront | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 6, i-2018 NgoLwesithathu, Februwari 7, 2018 Douglas Karr
I-PacketZoom, inkampani ithuthukisa ukusebenza kohlelo lokusebenza lweselula ngobuchwepheshe bokuxhumana nabantu ngaphakathi nohlelo, imemezele ukusebenzisana nayo Ama-Amazon CloudFront ukufaka i-CloudFront kwinsizakalo yePacketZoom's Mobile Expresslane. Isixazululo esihlanganisiwe sinikeza abathuthukisi bohlelo lokusebenza lweselula ipulatifomu yokuqala nokuwukuphela kwayo yazo zonke izidingo zabo zokusebenza kwenethiwekhi.
Yipulatifomu yokuqala ebanzi ekwi-one ekhuluma ngazo zonke izidingo zokusebenza zezinhlelo zokusebenza zeselula - isilinganiso, ukusebenza kwemayela lokugcina, nokusebenza kwamamayela aphakathi nendawo. Amaphuzu avelele wensizakalo afaka:
IPacketZoom's Mobile Expresslane isheshisa izinhlelo zokusebenza zeselula kufika ku-3x futhi ihlenga kuze kufike kuma-90% wokunqanyulwa kwenethiwekhi yabashicileli bohlelo lokusebenza kubandakanya iGlu, Sephora, Photofy, Upwork nabanye.
Ngokusebenzisana neWebhu CDN ye-CloudFront, i-PacketZoom ne-Amazon baba ngabokuqala ukunikela ngesixazululo senethiwekhi yokuxhumana esiseduze.
Kanye nePacketZoom ukusheshisa kokugcina kwamamayela weselula, amakhasimende athola isisombululo esifanele sokulethwa kohlelo lokusebenza lweselula.
Amakhasimende ePacketZoom asevele esebenzisa i-Amazon CloudFront emazweni ahlukene afaka iGlu Mobile, Upwork, Photofy (US), Perfect Corp (Asia), neBelorp (Latin America).
IPacketZoom ingumholi esikhaleni sokusheshisa uhlelo lokusebenza lweselula ngobuchwepheshe bayo be-Mobile Expresslane, esheshisa izinhlelo zokusebenza zeselula kuze kufike ku-3x futhi itakule kuze kufike kuma-90% wokunqanyulwa kwenethiwekhi kwabashicileli bohlelo lokusebenza lweselula okubandakanya iGlu, Sephora, Photofy, Upwork nabanye. I-PacketZoom ithuthukisa umuzwa womsebenzisi kuzinhlelo zokusebenza zeselula ngokususa izivimbamgwaqo ezisebenza kumayela lokugcina leselula. Ipulatifomu yayo yeselula inikezela ngohlelo oluphelele, lokuphela kokugcina lomkhiqizo we-Mobile App Performance Management & Optimization (APMO).
Isixazululo se-Amazon CloudFront Web CDN sinesabelo esikhulu kunazo zonke emakethe phakathi kwabashicileli bezicelo zeselula. Iletha ngokuvikelekile okuqukethwe ngokwandisa ukulethwa ebangeni eliphakathi nendawo. Kanye nokusheshiswa kokugcina kwe-PacketZoom mile mile, amakhasimende athola isisombululo esifanele sokulethwa kohlelo lokusebenza lweselula.
Siyajabula ukunikela ngomhlaba omuhle kunayo yonke: i-Amazon CloudFront - i-Web CDN edume kakhulu kubathuthukisi beselula - kanye nePacketZoom Mobile Expresslane - isisombululo esihamba phambili sokusheshisa uhlelo lokusebenza lweselula. Kube ukuvela komkhiqizo wemvelo kithina, ngoba amakhasimende ethu amaningi asebenzisa i-CloudFront. UShlomi Gian, Isikhulu Esiphezulu sePacketZoom
I-PacketZoom ichaza kabusha ukusebenza kweselula ngobuchwepheshe bokuxhumana nohlelo lwangaphakathi nohlelo. Idizayinelwe ngokukhethekile izinhlelo zokusebenza zesintu, ipulatifomu yePacketZoom inika amandla onjiniyela bohlelo lokusebenza lweselula ukuthi basebenzise ukusebenza kohlelo lokusebenza lweselula ngesikhathi sangempela. I-PacketZoom ithuthukisa ulwazi lomsebenzisi kuzinhlelo zokusebenza zeselula ngokususa izivimbamgwaqo ezisebenza kumayela wokugcina weselula, isheshise isivinini sokulanda kuze kufike ku-3x, isindise kuze kufike kuma-90% amaseshini kusuka kumaconsi wokuxhuma kwe-TCP nokunciphisa izindleko ze-CDN. Ngeminye imininingwane vakashela I-PacketZoom
Tags: amazon ngaphambiliI-belcorpCdnngaphambili kwefuglu mobilebhekumuziinkampani epheleleisithombeumsebenzi